Musharixiin cusub oo isga hartay doorashada madaxweynaha. | Arrimaha Bulshada
Home English News News Musharixiin cusub oo isga hartay doorashada madaxweynaha.
Musharixiin cusub oo isga hartay doorashada madaxweynaha.
Bulsha:- Waxaa isa soo taraya musharixiinta isaga hareysa tartanka madaxtinimo ee Soomaaliya oo goordhow la filayi iney ka dhacdo teendhada Afisyooni ee ku taala xerada ciidanka cirka.
Sida wararka la helayl ay sheegayaan, musharixiinta kala ah Jabriil Ibrahim Cabdulle iyo Xuseen Cabdi Nuunow ayaa ka haray tartanka doorashada, iyagoo aan bixin macluumaad ku aadan sababta ay uga hereen tartanka, maadaama ay ku sgan yihiin hoolka doorashada.
Horay illaa saddex Musharax isaga hareen doorashada kuwaasoo kala ah sC/kariin Xuseen Guuleed, Dahir Maxamuud Geele iyo C/naasir Cabdulle.